/Blog/Ithala/I-Isotretinoin e-Raw (i-Accutane) ye-acne: Ukwelapha i-Acne ne-Isotretinoin
ezaposwa ngomhla 02 / 01 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
I-Isotretinoin yonyango oluthile lwe-acne. Apha, uya kubona i-isotretinoin ukuhlaziywa, i-isotretinoin isebenzayo, iziphumo zecala le-isotretinoin kunye nolunye ulwazi malunga neyeza, kubandakanywa nemilinganiselo kunye nemilinganiselo yokuqapha.
Yintoni i-Isotretinoin (Accutane)?
Ngaba u khangela isotretinoin eluhlaza (Isotretinoin 4759-48-2)? Ewe, xa ungaziqhelani nalo, i-Isotretinoin yinto echanekileyo yomlomo yesicatshulwa. Ngokusebenzisa i-isotretinoin, iyeza lusetyenziselwa unyango kunye nokuthintela olukhuni, ukuphazamisa i-nodular acne okanye i-cystic acne.
Xa kuziwa kwiindawo zeekhemikhali zaseIsotretioin, i-isotretinoin eluhlaza i-13-cis-retinoic acid. Iza njengobomvu ukuya kwipuphu epholile e-orange kunye ne-molecular weight of 300.44. Inxulumene ne-retinoic acid kunye ne-retinol (i-vitamin A).
Wumkhwa we-cystic acne?
Mhlawumbi ucinga ukuba yintoni i-cystic acne. A i-cystic acne luhlobo olubi lwe-acne oluphumela kwi-skin pocked blocks, obangela ukusuleleka kunye nokuvuvukala. Abantu abaninzi, malunga neepesenti ze-80 zabantu abaneminyaka engama-11 kunye ne-30 iminyaka bafumana i-acne, kodwa kuphela inxalenye encinci yabo ine-acs acne, enzima kakhulu kune-acne.
I-cyst ye-acne idla ngokubanzi kwaye ikhuphe ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo kwaye ingenakuhamba nayo emva kokuba uthathe unyango lwe-acne. I-cystic pimple ingaba buhlungu yaye ininzi ishiya emva kobunzima obunzima.
Mhlawumbi i-acne yakho iyaqhubeka isanda naphezu kwemizamo eninzi yokungayiphumeli. Awudingi ukujonga ukuchaneka kwesantya. Eli gama lithetha ngokukhawuleza ukwanda kwenani lentetho ethile, kulo mzekelo, i-acne. Ngoko, ukutshatyalaliswa kwegama eliqhelekileyo kukuphindaphinda, kusasazeka, okanye ukunyuka.
Ukuba uthe wazama zonke iindlela zonyango ezifana nemithi ye-antibiotics kunye neyeza ezahlukeneyo zonyango ukuphatha i-cystic pimple okanye i-acne cyst, kodwa ngeze, i-Isotretinoin iya kuba yisisombululo esiphezulu. Ngaphandle koko, le nkunkuma ingasetyenziselwa unyango kwezinye iimeko zesikhumba, kuxhomekeke kwisinconywa sogqirha.
Igama leBhanti likaIsotretino
I-Isotretinoin yipilisi ye-retinoid, umkhiqizo we-vitamin A. yinto eyaziwayo ngamagama alo amagama:
Kwakhona, le nkunkuma ifumaneka kwiinguqu ezahlukeneyo.
Isotretinoin isebenza njani?
Ngaphandle koko, u-Isotretinoin usebenzisa, mhlawumbi uyazibuza, "njani i-Accutane isebenza?" Kutheni inamandla kakhulu ukuba inokwenza okokuthi ezinye iziza-antibiotics kunye nemithi yezolimo zingenako?
Ewe, nantsi inkcazo yempendulo yombuzo 'njani i-Accutane isebenza?'
Ngokufanayo nezinye iziyobisi, Imisebenzi yaseIsotretinoin ngokutshintsha iDNA yakho. Umphumo wokuguqulwa kukunciphisa ubukhulu kunye nokuveliswa kweengqungquthela ezihlambulukileyo.
Xa uthatha i-Isotretinoin, iyancipha i-skin's sebaceous glands ezijongene nokuveliswa kwe-sebum. I-Sebum yinto enamafutha kunye nomveliso wayo ogqithiseleyo unokukhokelela kwiinkalo ezahlukeneyo zesikhumba ezifana ne-acne.
I-sebum egqithiseleyo ikhusela izithambiso ezikhuselayo, ukukhusela i-oyile yesikhumba ekuphumeni kwayo. Oku kubangela ukuqokelela kweoli ngaphantsi kwesikhumba. Ibhaktheriya eyenza i-cystic acne (i-acne vulgaris) iyancipha kwiimeko ezifana ne-sebum ukutya kwabo.
Xa i-Acne vulgaris isondla kwi-sebum esikhumbeni sakho, ivelisa iimveliso ezinkunkuma kunye namafutha e-acids. I-excreta kunye ne-acids icasula izigulane ezinobungozi kwaye zibenza zitshise. Iindawo zesikhumba zenzeka ngenxa yoko.
Ngoko, xa i-Isotretinoin iyancipha i-glands, ixabiso lemveliso yazo ye-sebum linciphisa. Ngenxa yoko, ukugqithwa kwama-cores nge-sebum kuncitshisiwe. Ukuqwalasela ukuba izibhokhwe, okanye kunokuba zihlambuluke, zininzi zivela ngenxa yesikhumba se-peore esivumbileyo nge-sebum, umphumo wonyango olawulayo.
Ithintela ukukhutshwa kweengqungqungquthela zesisu kunye nanjalo, kukho ubuncipheko obuncinane bokuthi iibhaktheriya ziphumelele esikhumbeni. Isilwayo sinciphisa ukhenyuza kwesikhumba. Ngaphandle koko, le nkunkuma iyanciphisa ukunyaniseka kweeseli eziye zachithwa kwiingqungquthela ezihlambulukileyo. Oku kunciphisa amandla abo ukudala amnyama kunye namhlophe.
I-Isotretinoin ebomvu nge-acne Ukwelashwa
Isotretinoin 4759-48-2 Akungathandabuzeki ukuba unyango oluphezulu lwama-acne, ngokukodwa kwiimeko ezinzima apho ukusetyenziswa kwee-antibiotiki kunye nemichiza ye-acial medication yenziwe yinto engenamsebenzi. Enye into emangalisayo malunga ne-Isotretinoin njengonyango lwe-acne kukuba unokufuna ukuyisebenzisa nje ixesha elifutshane nje, mhlawumbi i-16 ukuya kwii-20 iiveki ukuba uthethe iimbumba zakho, kungakhathaliseki ukuba zinzima kangakanani.
Nangona kunjalo, i-dermatologist yakho inokuncoma iklasi yesibini yokwelashwa kwexesha elifanayo ukuya kuvuleka ngokupheleleyo kwe-acne yakho. Oku akufani nabaninzi kwezinye izidakamizwa zamachiza onokudinga ukuba usebenzise ngokuqhubekayo ixesha elide okanye nakunaphakade ukuze ugcine umlomo.
Nangona kunqabile ukuba ufumane izibhokhwe kwakhona xa usenziwa nge-Isotretinoin yinkqubo yokonyango, ingcali yakho yokunakekelwa kwesikhumba inokukucebisa ukuba utshintshele kumachiza omzimba we-acne ukugcinwa kwesikhumba sakho esitsha, esingenasici.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba uqale ukubona iziphumo ze-Accutane?
Oku kunokubangela ukuba ungamangaliswa ukuba awuzange uve ngako ngenxa yokuba ayikho into ekulindelekileyo; iimpumpo zakho zingase zibe zibi ngakumbi xa ziqala ukuthatha i-Isotretinoin. Hayi! Musa ukuphuma ngaphandle!
Nangona kunjalo, uya kuqala ukubona Iziphumo ze-Accutane ngaphakathi kwe-7 kwiintsuku ze-10 kwikhosi yakho yonyango. I-pimple yakho iya kuqala iyancipha kancane kancane ngexesha.
Ininzi, ukucoca okupheleleyo okanye okufutshane-ukucima i-acne kwenzeka kwi-16 kwii-24 iiveki zenkampu yokonyango. Emva kokuba uhamba kunye nekhosi, uya kuba ne-acne-free isikhathi eside kakhulu.
Inkqubo yokuphinda ikhuthazwa kuphela kwiimeko apho kubonakala kwakhona ukuphindaphinda ngokuqinisekileyo emva kwenkqubo yokonyango. Nangona kunjalo, inkqubo yokuphindaphinda kufuneka iqaliswe ubuncinane ubuncinane kwiiveki ze-8 emva komhla wokugqibela wekhosi yangaphambili (yokuqala). Oku kubangelwa ukuba i-acne ikwazi ukuphucula ngaphakathi kwelo xesha emva kwekhosi yokuqala.
Indlela yokusebenzisa i-Isotretinoin
I-Accutane (i-Isotretinoin) ifumaneka kwi-10-mg yomlomo, i-20-mg kunye ne-40-mg i-gelatin capsules. Iimpawu eziqulethwe kwi-capsule nganye yale nkunkuma zibandakanya i-bex, i-hydroxyanisole ekhuselekile, ioli ye-soya, i-edetate disodium, i-hydrogenated yemifuno yeoyile kunye ne-hydrogenated oil oil flakes.
Ngamanye ama-isotretinoin 10mg, i-isotretinoin 20mg kunye ne-isotretinoin 40mg capsule ineenkqubo zeeeta ezahlukeneyo. I-Isotretinoin i-10mg ifaka i-iron oxide (ebomvu) kunye ne-titanium dioxide, i-20mg ine-FD & C ebomvu i-3, i-FD kunye ne-Blue Blue i-1, kunye ne-titanium dioxide ngelixa i-40mg ine-D & C eYinombolo ye-6, i-D & C iJapan no-10, kunye ne-titanium dioxide iinkqubo.
Ngolwimi lwe-layman u-isotretinoin 10mg uza kumbala obomvu obomvu, i-20 mg e-maroon, ngoxa i-40 mg iluhlaza.
Isotretinoin eyahlukileyo kwizigulane ezahlukeneyo. Ngoko ke, kubalulekile ukuba ulandele umyalelo wakho ugqirha wemigaqo yokusetyenziswa kwilebula yayo.
Ukulawulwa kwesigqabiso kukuba i-isotretinoin yakho yokuqala ixhomekeke kwisisindo somzimba wakho, imbambano yonyango osebenzisa ngayo izidakamizwa kunye namandla olo.
Kubantu abadala kunye nabantwana abangenani ubuncinane be-12 ubudala, i-dose yemihla ngemihla yi-0.5 kwi-1 milligram (mg) nganye ngeekhigram (kg) yesisindo somzimba. Naluphi na umthamo ugqirha ugqirha, kufuneka uthathwe ngesidlo rhoqo.
I-Isotretinoin dose ithathwa njengezidibaniso ezimbini kunye nesigulane esifanelekileyo kufuneka sithathe i-15 kwiiveki ze-20. Kubafundi abasebancinci kuneminyaka eyi-12 ubudala, i-dosage yabo kufuneka imiswe ngugqirha wabo.
Ukuba ugqirha wakho akunika i-0.5 mg / kg / ngosuku i-isotretinoin dose, oko akuthethi ukuba uya kusebenzisa le dose kwikhosi yonyango. Ngokuxhomekeke kwimpendulo yakho kwilisi, ngokukodwa ekugqibeleni i-cystic acne kunye nokubonakala kwemiphumo emibi yecala, ugqirha wakho unokulungisa udosi.
Nantsi i-Isotretinoin ye-4759-48-2 isisindo ngokwemilinganiselo yomzimba
Iyonke mg / usuku
Kgs iipounds 0.5 mg nganye ngekg 1 mg nganye ngekg 2 mg ngekg *
Nangona kunjalo, kukho ikhefu ekhethekileyo kwinqanaba lezincomo zonyango. Abantu abadala abane-acsic acne ebangela ukwesaba okanye i-nodular acne ebonakaliswe kwiminyango yabo ingadinga ukuhlengahlengiswa ngu-2.0 mg / kg / ngosuku, kuxhomekeke ekuxhaseni kwabo kwi-myorisan (Isotretinion).
I-Accutane (isotretinoin) kufuneka ithathwe ngokutya. Kucebise ukuba uthathe yonke imosi yesilwanyana ngokukhawuleza emva kokutya okanye ukutya okuninzi ukuze kuqinisekiswe ukuba uphumelele kakhulu kweyeza.
Ukungaphumeleli ukuthatha isiqulana kunye nokutya kuya kunciphisa ukutyunjwa kwalo ngumzimba ngokubanzi. Ngako oko, phambi kokuba ugqirha wakho ulungise umthamo wakho phezulu ukuya kunyusa ukusebenza kwechiza, uya kubuzwa malunga nokuthobela kwakho imiyalelo yokutya.
Kwakhona, kufuneka ugxobhise i-Accutane capsule ngokupheleleyo ngaphandle kokuchoboza, ukuphula, ukuhlafuna okanye ukuyilisa. Ngaphandle koko, kufuneka uginye ngeglasi yamanzi.
Ikholeji enye ye-Isotreta iboniswe ukuba ibangele ukuxolelwa ngokupheleleyo okanye okuqhubekayo kwe-cystic acne. Nangona kunjalo, njengoko kuchazwe ngasentla, xa i-dermatologist yakho ithola ukuba kuyimfuneko ukuba ube nekhosi yesibini yonyango, kufuneka uqale ukususela ngeveki yesibhozo emva komhla wokuqala kwekhosi.
Kwisifundo ukuhlalutya ukusebenza kwe-isotretinoin dosages, kwaqulunqwa ukuba bonke banikezela ukucinywa kokuqala kwe-acne. Nangona kunjalo, ukubuyiswa kwakhona kunye namayeza angaphantsi kufumanekile ukukhuseleka.
Yintoni ekufuneka uyiphephe xa uthatha i-isotretinoin
Ukukhulelwa ngelixa uthabatha unyango kwaye emva kwenyanga enye emva kokuphela kwenkqubo yokonyango.
Ukubeleka ngexesha lokunyanga kwaye kwinyanga enye emva kwekhosi. Kucingelwa ukuba isilwanyana singadlula ubisi lwakho kwaye mhlawumbi silimaze umntwana wakho kodwa akukho bungqina bobunzululwazi bokubuyisela isikhalazo.
Ukunikela ngegazi ngelixa uthabatha iyeza kunye nangenyanga enye emva kokuphela kwenkqubo yokonyango. Ukuba owesifazane okhulelwe ufumana igazi lakho elizinikeleyo, umntwana wakhe unokube esengozini yemiphumo emibi yeyeza.
Ukuthatha amanye amayeza okanye iimveliso zengqolowa equkethe i-Accutane (i-isotretinoin) ngaphandle kokuba uvunyiwe ugqirha.
Ukuqhuba ebusuku xa imeko yakho yobusuku ichithwe yi-Accutane (isotretinoin).
Ukufumana inkqubo yokonkcenkceshela kwesikhumba, xa uthabatha i-Accutane kunye neenyanga ezintandathu emva kohlobo lwenyango. Iinkqubo zibandakanya ukuxhoma, i-dermabrasion kunye ne-lasers. Amachiza anokukwenza ube sisengozini yokukhawulwa ngenxa yezi nkqubo.
Ukukhanya kwelanga kunye nokukhanya kwe-ultraviolet. Amachiza anokunyusa ukhenkcela kwesikhumba sakho kwezi zibane.
Ukukwabelana kwesi sidakamizwa nabanye abantu. Njengoko kuchazwe ngasentla, isilwanyana kufuneka sithathwe kwimiyalelo yesigqirha.
Ulahlekile i-Accutane (isotretinoin) dose
Ukuba uthe waphoswa umthamo wakho we-myorisan, kufuneka uwathathe ngokukhawuleza xa unakho. Nangona kunjalo, ukhumbule malunga nayo xa iphantse ixesha lakho elizayo, nje ususe i dose ephosakeleyo uze uphinde uqhubeke neshedyuli yakho yexesha eliqhelekileyo. Thatha umthamo olandelayo ngexesha eliqhelekileyo. Musa ukuthatha amanyathelo amabini ngexesha elinye okanye usondele kakhulu komnye nomnye.
Ngenxa yeziphumo ezinobungozi ezinzulu ze-Accutane (i-isotretinoin), ukuthengiswa kweziyobisi kwenziwa kuphela ngohlelo olukhethekileyo lokusabalalisa olubizwa ngokuthi iPLEDGE ™. Le nkqubo ivunyiwe nguLawulo lokuTya nokuDa.
Abalawuli beliyeza kufuneka babhaliswe kwaye baqaliswe kule nkqubo- IPLEDGE. Ngaphandle koko, isicatshulwa sisodwa kwizigulana ezibhaliswe kunye nenkqubo kwaye ziqinisekiswe ukuba zihambelana ngokucacileyo neemfuno zeprogram.
Ngoko, yintoni na malunga neprogram ye-iPledge?
Injongo ephambili yeprogram yenkqubo ye-iPledge kukuqinisekisa ukuba abantu abaqeqeshiweyo kuphela bathatha loo mayeza kunye nemiphumo echaphazelekayo ingagcinwa kangangoko kunokwenzeka ngokubambelela kwimiyalelo yesigqirha kunye nokugcinwa ngokuqinileyo kwamanyathelo okulumkisa. Izinto ezibandakanyekayo kule nkqubo ziquka iimvavanyo zenyanga zokukhulelwa kunye nokulawulwa kokuzalwa. Thetha nogqirha wakho ukuba wazi ngokubanzi malunga nenkqubo.
Izigulane zamabhinqa ezinokukhulelwa zifanele ukuba zibe nemigodi emibili okanye i-serum ukukhulelwa kokunciphisa ubuncinane be-25 mIU / mL. Iziphumo zabo zombini iimvavanyo kufuneka zibabi ukuba zifumane i-prescription yokuqala ye-Accutane (isotretinoin).
Uvavanyo lokuqala lufunyenwe yingcali echaza i-Accutane (i-isotretinoin) ekumiseni ukuba i-acne ifanelekile kwi-Accutane unyango. Uvavanyo lwesibini lwenziwe ngokukodwa ukuqinisekisa iziphumo zovavanyo lokuqala. Kufuneka ukuba kwenziwe kwibhubhoratri nge-certified CLIA. Ixesha eliphakathi kweemvavanyo ezimbini akufanele libe phantsi kweentsuku ze-19.
Ukuba ngaba unesigulane sesigulane se-cystic nesigxina sokuya esikhathini, ukuhlolwa kwesibini kokukhulelwa kufuneka kwenziwe kwimihla yokuqala yesihlanu kwimihla yokuya esikhathini esifanelekileyo ngaphambi kokuqala kokuqala kwe-Accutane (isotretinoin). Ngaphandle koko, uvavanyo kufuneka lwenziwe emva kokusebenzisa iintlobo ezimbini zokukhulelwa kwezilwanyana kwiintsuku ze-30.
Ukuba umjikelo wakho wokuya esikhathini ungenasiphelo, okanye kuluhlu lolawulo lokuzalwa oluvimbela ukuhoxiswa kwegazi, uvavanyo lwesibini lufanele lwenziwe ngethuba elingaphambi kokuqala kwe-Accutane (isotretinoin) yonyango. Njengokuba kunjalo kunye nomfazi onomjikelezo oqhelekileyo wokuya esikhathini, lo vavanyo kufuneka lwenziwe emva kokuba sele usebenzisa iintlobo ezimbini zokukhulelwa kwezilwanyana kwiintsuku ze-30.
Kufuneka uqondisise kwaye ulandele ngokungqongqo zonke iimfuno zeprogram ye-iPledge. Ngaphandle koko, awuyi kufaneleka ukufumana iziyobisi okanye omnye umyalelo weyeza.
Saye sabona ukuba kukho ezininzi iimpawu ze-isotretinoin. Enye into enifanele ukwazi ukuba i-different isotretinoin brand isebenza ngokuhlukileyo. Ngaloo ndlela, iifomsile zecandelo elithile leziyobisi akufanele lifakwe endaweni enye nayiphi na ifom ye-isotretinoin.
Ngokomzekelo, akufanele ubeke iifomane ze-Accutane ngeefomsile ze-Absorica. Ngoko ke, xa uzalisa i-isotretinoin yakho (i-Accutane) kwaye ufumanisa ukuba ibonakala ihluke kwinqanaba lokuqala, funa ukucacisa kwi-pharmist yakho.
Ziziphi iziphumo ezibi yeAccutane
Mhlawumbi ngelo xesha uyazibuza, "i-Accutane iphephile?"Kakuhle; kwinto enjengeli gciwane lonyango olusebenzayo lwe-acne, njengawo nawaphi na amayeza, lingaba nemiphumo emibi. Kodwa akukho nto inokukhathazeka ngayo ngemiphumo emibi ye-Isotretinoin ngokukodwa xa ulandela imiyalelo enobumba kwaye uqaphele ngokucophelela izilumkiso.
Siya kubona ngaphezulu malunga nokuqapha (i-dos kunye ne-don't) apha emva koko.
Enye into omele uyenze ukuyikhumbula ngemiphumo emibi ye-Accutane kukuba akuyena wonke umntu othabatha amayeza (imiphumo engathandekiyo). Ngaphandle koko, iziphumo ezingathandekiyo ziya kupheka xa uyeka ukuthatha amayeza.
Nangona ezinye iziphumo zempembelelo ze-Accutane ziqhelekile kwaye zibi kakhulu, ezinye zizodwa kwaye zizinzima. Masiqale sijonge imiphumo ecaleni ye-Accutane.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-Isotretinoin
Iziphumo eziqhelekileyo ze-Isotretinoin ziquka:
Ukomisa isikhumba, ukukhwabanisa kunye nokuhlambalaza
isikhumba esikhathekayo, ingakumbi kwiintendelezo kunye neengcambu
Umlomo, impumlo, kunye nokomisa kwamehlo
Umbono wobusuku obuncitshiswayo
Ukukhathala (ukhathala kakhulu
Ubomvu, imilenze ephukile kunye nebuhlungu
Iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo ze-Accutane
Nangona ezi ziphumo zilandelayo zivela, iziganeko zazo aziqhelekanga. Enyanisweni, kuphela ngaphantsi kwe-0.001% yabantu abathatha amava ezi ziphumo ezinzulu. Ezi ziphumo ziquka:
Amathambo namalungu amaninzi
Intlungu kunye nentlungu esiswini
Ubunzima okanye ubunzima xa uginya into ethile
Ikhumba elomileyo kunye nemilomo yimiphumo emibi kakhulu. Ukukhusela, ungabi naluphi ukhenkceza, i-dermabrasion, okanye unyango lwelasi yesikhumba ngelixa uthatha i-isotretinoin nge-acne kwaye ubuncinane ubuncinane kwiinyanga ze-6 emva kokuyeka, njengoko oku kunokubangela ukuba inqabile okanye inqabiseko yesikhumba.
Abantu abaninzi babuza, "Ngaba i-Accutane iphephile kubafazi abakhulelweyo?" Impendulo ayikho; akukhuselekanga nonke kubafazi abakhulelweyo.
Abafazi abakhulelweyo bayaxhalabisa kakhulu ukusebenzisa i-Accutane nge-acne okanye kwi-cystic acne unyango okanye nayiphi na injongo. Kwakhona, abafazi abakwazi ukukhulelwa ngexesha lolawulo lwe-Roaccutane akufanele basebenzise iziyobisi.
Isizathu sokulumkisa kukuba umphumo we-Isotretinoin umthamo wesenzo, kungakhathaliseki ukuba i-Isotretinoin dosayo, inokuchaphazela umntwana, kubangela ukukhubazeka kokuzalwa. Ezinye zezitho zomzimba / iinxalenye zomntwana ongasichaphazelekayo zibandakanya ubuso, ubuchopho, iintliziyo zentliziyo, amehlo kunye ne-thymus kunye neengqungquthela zengqondo.
Kwakhona, owesifazane okhulelweyo othabatha le nyilisi usemngciphekweni omkhulu wokukhipha isisu okanye ukuzalwa ngaphambi kokuzalwa.
Ukuba ibhinqa elithatha i-Accutane (i-Isotretinoin) ikhulelwa (ikhulelwa), kufuneka iyeke ukusebenzisa le nonyango ngokukhawuleza kwaye ityelele i-Obstetrician-Gynecologist eye yafumana inetyhefu yokuzala.
Nangona kungekho ndlela echanekileyo apho ingcali ingasenza ukuba umntwana ongakazalwa uchatshazelwe ngu-Isotretinoin indlela yokwenza isenzo, unokuqhuba ukuvavanya ukuqinisekisa ukuba injalo. Ngaphandle koko, unina uya kufumana iingcebiso ukuze akwazi ukujamelana nokukhathazeka okubangelwayo kunye neziphumo ezingenakwenzeka.
DIes Isretretinoin kubangela ukudakumba?
Ukudandatheka kukuchaphazela kakhulu i-Isotretinoin. Kukho ezinye iingxelo ezibonisa ukuba abanye abantu bathabatha uxinzelelo lwamava eziyobisi. Nangona kunjalo, akukho bungqina bobunzululwazi obudibanisa i-roaccutane nokuzibulala.
Akukho mntu onokuyichazela ngokwenene ukuba le nkunkuma ingabangela ukudandatheka. Nangona kunjalo, ezinye izazinzulu zikholelwa ukuba loo mayeza anokuphazamisa umveliso we-serotonin kunye nendlela esetyenziswa ngayo umzimba.
Mhlawumbi oku kuyavakala ukwethusa kodwa akukho sizathu soxolo. Isizathu? Uninzi lwabantu abasebenzisa i-Isotretinoin nayiphi na ingxaki yengqondo. Enyanisweni, akukho bungqina obuqhagamshelana nokusetyenziswa kwe-Isotretinoin ngokudandatheka. Kungcono; ezinye izifundo ziye zabangela ukungathandabuzeki kwikhonkco elinokwenzeka phakathi kwezi zibini.
Nangona kunjalo, njengendlela yokuqapha, xa unembali yokudakumba okanye nayiphi na uhlobo lwesifo sengqondo, qiniseka ukuba uyayifumanisa ingcali yakho yezempilo ngaphambi kokuba uqale uthabathe i-Isotretinoin. Kwakhona, xa uhlakulela iimpawu zokudandatheka kunokuzibulala okanye u-psychosis ngenkathi uthatha i-Isotretinoin; unganqikazi ukuvumela umboneleli wakho wenkonzo yezempilo ukuba azi.
Indlela yokujongana nemiphumo emibi ye-Accutane
Kukho izinto onokuzenza ukujongana nemiphumo echaphazelekayo ye-Isotretinoin:
Isotretinoin side effect Indlela yokuhlangabezana nayo
isikhumba esomileyo okanye umlomo Faka isicelo se-moisturizer
Nciphisa ixesha lakho lokuhlamba ukuya ngaphantsi kwemizuzu ye-2 kwaye usebenzise amanzi ashushu afudumele
Ukwanda kwengqondo kwesikhumba ekukhanyeni Hlala kude nelanga elikhanyayo kwaye usetyenzise into ephakamileyo, i-sun cream ye-free sun esikhanyeni sakho nangona ifuba. Gwema ukusebenzisa i-sunlamp okanye i-sunbeds
Amehlo aname Cela i-eye yakho ingcali ukuba ikucebise kuwe amanye amaconsi asehlo. Xa unxiba ii-lens zokudibanisa kwaye uzive ungakhululekile xa uthatha i-Isotretinoin, unokuzifaka ngeiglasi ngexesha oza kuthatha ngalo unyango.
Dry umlomo / umqala Gaya i-gum okanye uswidi.
Cela unokhemisti ukuba akucebise isilwanyana esiluncedo.
Gwema ukuzivocavoca ngamandla njengoko kunokuba buhlungu ngakumbi
Ngaba i-Isotretinoin Safe to Use?
Impendulo malunga nokuba i-Isotretinoin iphephile ukuyisebenzisa ingaba nguwe ewe okanye cha. Kuxhomekeke kumntu.
Okokuqala, njengoko kukhankanywe ngasentla, kukho iimeko ezithile (umzekelo, abafazi abakhulelweyo okanye abo banokukhulelwa) okwenza abanye abantu bangafanelekanga ukusebenzisa iziyobisi. Ukuba unemiqathango, ayiyi kukhuseleka ukuba usebenzise i-Isotretinoin
Ngaphandle koko, i-Isotretinoin isetyenziswe kuphela ukuba ithathwe ngabantu abane-acs acne / nodular acne okanye i-acne ephakamileyo yomqolo okanye umzimba ongasayi kucacisa nangemva kokuthatha i-retinol ye-acne okanye nayiphina imithi ye-acne. Ukuba imeko yakho imnene, i-dermatologist yakho iya kunika ezinye iimveliso ezinomzimba kunye ne-vitamin A nge-acne okanye nayiphi na enye ingonyango ebonakalisa unyango lwe-acne.
Indlela yokuthenga i-Accutane (i-isotretinoin) kwi-intanethi
Ukuba ngaba umenzi, isigulane okanye umseli-mveliso, udibene nayo yonke imfuno yeprogram ye-iPledge kwaye ufuna ukuthenga i-isotretinoin, ungayifumana i-intanethi ngaphandle kwe-intanethi. Nangona kunjalo, khumbula ukuba kukho i-caveat xa kuziwa ekuthengiseni kwesi sidakamizwa; kufuneka kuthengiswe kuphela ngababoneleli abavunyiweyo be-iPledge kunye nabasemasimini.
Ukuze uvumeleke ngokusemthethweni ukuba usasaze okanye uthengise i-isotretinoin, kufuneka uqale ubhalise kwi-iPLEDGE kwaye uvumeleke ukuzalisekisa zonke iimfuno ezibekwe yinkqubo ye-isotretinoin yokuhanjiswa kwemveliso.
Ukuqwalasela iimfuno, aasraw.com iyona nto ibhetele, eyona nto ifanelekileyo kunye nendawo apho ungathenga khona i-isotretinoin ngokungenakunzima. Sithengisa i-isotretinoin yangempela eluhlaza kunye ne-isotretinoin capsules kubanikazi kunye nabasemasimini kwixabiso lokukhuphisana.
Ufanele ugcine njani i-Accutane (isotretinoin)?
I-Accutane (i-isotretinoin) kufuneka igcinwe kwisitya esitywinwe kwiqondo leshushu (59 ° kuya kwi-86 ° F, 15 ° kuya kwi-30 ° C). Indawo ogcina ngayo le chiza kufuneka ibe kude nokushisa kunye nokukhanya okuthe ngqo kwaye kufuneka ibe ngumswakama. Ngaphandle koko, isilwanyana akufanele sitshintshwe kwaye kufuneka sigcinwe ngaphandle kwabantwana.
Musa ukugcina le nkunkuma ukuba ayisayifuneka okanye iphelelwe yisikhathi. Nangona kunjalo, musa ukulahla usebenzisa nje nayiphi na indlela; qhagamshelana neengcali zonyango lwakho malunga neendlela ezifanelekileyo zokulahla.
Makhe sibone ezinye iindlebe zokuvavanywa kwabanye abantu abaye basebenzisa iyeza.
UHannah White: "Akakwazi ukuhlala uxolo! Ekugqibeleni, ndikwazi ukufumana ubuso bomntu ongekho nto endiyithandayo iminyaka. Ukususela kwam ebuntwaneni be-12 kwiminyaka eyadlulayo, ndandilwa ne-acne. Ndilahlekelwe ukuzithemba kwam ngenxa yoko.
Ndazama phantse yonke imveliso ye-anti-acne kodwa akukho namnye wabo owakwazi ukulahla izibhobho. Kunyaka odlulileyo, umhlobo wandincenga ukuba ndizame i-Isotretinoin endiyenzayo. Ndagqiba unyango ezimbini kwiinyanga ezidlulileyo kwaye ndivuyiswa kakhulu ngeziphumo. I-acne yam icacile kwaye amabala amnyama ayaphela. Ndiya kucetyiswa ukuba le nkunkuma kumntu. "
UKelly: andinakubulela nabani na abaza kunye ne-isotretinoin ye-acne. Ukuba kwakungengenxa yeziyobisi, ndisaqhubeka ndijongana ne-acs acne. Ndiyakumcebisa nabani na apho baphelelwa ukuyeka ukufumana amayeza e-cystic acne ukuze ba tyelele ugqirha babo baze bafumane ukuba kulungile ukuba basebenzise i-Isotretinoin (Accutane). Ngokwenene le mayeza wenza izinto ezimangalisayo; Ndiyakuqinisekisa ngokuqinisekileyo oko.
UJuliana: "Nangona i-isotretinoin yandibiza ingalo nomlenze, ndandixabisa imali yam. Enyanisweni, ndivakalelwa kukuba ndinezinto ezingaphezulu koko ndihlawule. Ndiqinisekile ukuba ndiqhubeka ndisebenzisa amayeza am aqhelekileyo, ndandichitha imali eninzi, kodwa ndingenakufumana iziphumo ezifunwayo. Ndiyincoma kakhulu i-Accutane nge-acne ebetha nezinye iimveliso kunye ne-vitamin A ye-acne. "U
Emily Hanson: "wow! Ayikwazanga ukuvuya ngakumbi kunye ne-isotretinoin inkqubo yesenzo kunye neziphumo. Emva kokufunda ezininzi i-isotretinoin ukuphonononga, ndagqiba ekubeni ndwendwele i-pharmist ukuza ukuba isilwanyana sasifanelekile.
Xa ebona irekhodi lwam unyango lwama-acne, waqinisekisa ukuba i-acne yayingaphathwa ngokusebenzisa i-isotretinoin njengoko yayinzima kwaye yaqhubeka ixesha elide nangona unyango oluthile. Ndaqala ukubona ukuphucuka okubalulekileyo ebusweni bam kwiiveki ze-10 zokuqala zonyango kunye neveki ye20, i-acne yayisuswe ngokupheleleyo. "
UBilly Harts: Ndiyimvume ye-Pharmist evunywe yilayisensi kunye ne-iPledge ene-drug e-Illinois. Ndaqala ukuthengisa i-isotretinoin malunga nonyaka omnye odlulileyo kunye nomfana ...! Esi sidakamizwa sithengisa njenge-hotcake. Ngaphandle kweemfuneko ze-iPledge, izigulane zam zidumisa kakhulu. Ndingathanda ukubonga i-aasraw.com ngokusondeza kum.
USalome Williams: "Musa ukucinga ngeendleko ze-isotretinoin; le nkunkuma yinkqubo yangempela yonyango lwe-cystic acne. Sekuyiminyaka emithathu ukususela ngeli xesha ndigqibile i-course ye-isotretinoin yonyango kwaye andinakuvuya ngakumbi kunye neziphumo. I-acne yami yanyamalala kwaye ngoku ndiyakwazi ukuphuma ngokuzithemba. "U
UCharlene B: Ukusebenza kwesi sirhoxiso ekulwa ne-acne enamandla ayinakulinganiswa. Ndandizame iimveliso zonyango zamashumi amaninzi kwaye yi-isotretinoin kuphela eyakwazi ukundinceda ukuba ndikhulule kwiinkathazo. Ndiyabulela kakhulu ngenxa yeli liyeza.
I-Isotretinoin ingaphaya kwamathandabuzo enyango yonyango ephezulu. Ukuba unesifo esinamandla se-cystic okanye isigulane esinama-cystic impimples amakhulu angacacanga nangemva kokuthatha amanye amayeza e-acne, le nkunkuma ifanelekile ukuba ibe yindlela yokwenza unyango olufanelekileyo. Nangona kunjalo, iingcebiso zegqirha zibaluleke kakhulu ngaphambi kokuba umntu aqalise ukuthabatha la mayeza. Kwakhona, isiguli kunye nomsasazo wezilwanyana kufuneka baqinisekise ukuba bahlangabezana nazo zonke iimfuno eziphathelele ukuphathwa kweyeza.
UWysowski, uDiane K., uJoseph Swann, kunye ne-Amlys Vega. "Ukusetyenziswa kwe-isotretinoin (i-Accutane) e-United States: ukwanda ngokukhawuleza kwi-1992 nge-2000." Umbhalo we-American Academy of Dermatology4 (2002): 505-509.
Feldman, S., Careccia, RE, Barham, KL, & Hancox, J. (2004). Ukuxilonga kunye nokunyangwa kwe-acne. Ugqirha wezeMerika waseMerika, 69(9), 2123-2138.
Barak, Y., Wohl, Y., Greenberg, Y., Dayan, YB, Friedman, T., Shoval, G., & Knobler, HY (2005). Iengqondo zengqondo zilandela i-Accutane (isotretinoin) unyango. I-psychopharmacology yamazwe ngamazwe, 20(1), 39-41.
Stern, RS, Rosa, F., & Baum, C. (1984). Isotretinoin kunye nokukhulelwa. Umbhalo we-American Academy of Dermatology, 10(5), 851-854.
Barnes, CJ, Eichenfield, LF, Lee, J., & Cunningham, BB (2005). Indlela efanelekileyo yokusetyenziswa kwe-oral isotretinoin ye-acne encanele. Isondlo sembewu, 22(2), 166-169.
Kilcoyne, RF, Cope, R., Cunningham, W., Nardella, FA, Denman, S., Franz, TJ, & Hanifin, J. (1986). I-spinal hyperostosis encinci ne-dootretinoin. I-radiology yophando, 21(1), 41-44.
I-Raw Proviron (iMesterolone) ekwakheni umzimba, umyinge, kunye nomjikelezo Zonke Izinto Nge-Trenbolone Inanthate Powder